Going Overboard? Shipping Rules Seen Shifting Pollution From Air to Sea | Myanmar Business Today
Home MMBIZ News Going Overboard? Shipping Rules Seen Shifting Pollution From Air to Sea
Noah Browning (Reuters)
Scepticism lingers among some, however.”There are all these huge changes,” one senior oil trader said. “But in the end you can stillbuyapiece of kit that just dumps it in the water.”
‌ပိုမိုသန့်ရှင်းသော လောင်စာဆီများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုများကို လျှော့ချရေးအတွက် သင်္ဘောများကို စည်းမျဥ်းဥပဒေများချမှတ်ခြင်းကြောင့် ပင်လယ်ပြင်တွင် ဆာလဖာနှင့် နိုက်ထရိတ်များစွန့်ပစ်မှု ပိုများလာနိုင်ကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်သူများနှင့် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်များက ဆိုကြသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှစတင်ကာ United Nations International Maritime Organization (IMO) အနေဖြင့် ဆာလ်ဖာပါဝင်မှု ၀ဒသမ၅ ရာခိုင်နှုန်းအထက်ရှိနေသော လောင်စာများ သုံးစွဲနေခြင်းအား ပိတ်ပင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယခုလက်ရှိတွင် ဆာလ်ဖာပါဝင်မှု ၃ဒသမ၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ရာစုနှစ်အတွင်းက ကျောက်မီးသွေးများ သုံးနေခြင်းမှာ ရေနံသို့ ပြောင်းသုံးလာပြီးနောက်တွင် ယခုစည်းမျဥ်းများက သင်္ဘောများတွင် လောင်စာအသုံးပြုမှုအား ခုန်ပျံကျော်လွှား ပြောင်းလဲသွားစေမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် scrubbers ဟုခေါ်သော သန့်စင်ရေး ကိရိယာများနှင့် ကိုက်ညီပါက ဆာလ်ဖာပါဝင်မှုများပြားသော လောင်စာများကိုလည်း ဆက်လက် အသုံးပြုခွင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
Closed-loop scrubber များမှာ ဆာလ်ဖာဖယ်ရှားရေးအတွက် အသုံးပြုသော ရေအများစုကို သို‌လှောင်ထားကာ ဆိပ်ကမ်းရောက်မှ စွန့်ပစ်သည်။ Open-loop စနစ်များတွင်တော့ သင်္ဘော၏ မီးခိုး ခေါင်းတိုင်မှ ထွက်သည့် ဆာလ်ဖများကို ရေဖြင့် ‌ဖယ်ရှားကာ အဆိုပါ ရေများကို ပင်လယ်တွင်းသို့ စွန့်ပစ်သည်။
Previous articleDrugstore Drones: UPS Will Fly CVS Prescriptions to Customers
Next articleTesla Reports Profit for Quarter, Sending Shares Soaring